Saturday September 05, 2020 - 16:52:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xarunta madaxtooyada Villa Somalia waxaa ka furmay kulan ay isugu yimideen madaxda maamul goboleedyada iyo hoggaanka DF-ka Soomaaliya.
Dib ufurmidda kulankan oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf xooggan ka taagnaa ayaa la sheegay in xal hordhac ah laga gaaray.
Axmed Madoobe iyo Farmaajo ayaa la sheegay in ay isla garteen in gobolka Gedo dib loogu celiyo gacanta maamulka 'Jubbaland' balse marka hore loo saaro guddi laba xubnood ah sida ay wararku sheegayaan.
Kulamo albaabadu uxiranyihiin oo udhaxeeyay Axmed Madoobe,Saciid Deni iyo Farmaajo ayaa dhacayay xalay illaa saaka balse waxaa maanta duhurkii kulamada ku biiray hoggaamiyaal kale oo Muqdisho soo gaaray.
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa dhinacyadan shisheeyaha ku daaban ku cadaadinaysay in ay kulmaan si ay xal kama dambays ah uga gaaraan khilaafka ku saabsan doorashooyinka dhici doona horraanta sanadda 2021-ka ee laysku fahmi la'yahay.
Roobabka Xilliga Dayrta oo ka curtay qaar kamid ah gobollada dalka.
Toogasho dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacday mid kamida gobollada Mareykanka.
Hardanka udhaxeeya dowladaha Azerbijaan iyo Armeeniya oo xoogeystay.
Dagaallo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay mid kamida gobollada Itoobiya.